September 6, 2021 - Online Hartha
လူသိနည်းလှတဲ့ လှေကားအဆံတပ်ဆင်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
September 6, 2021 by Online Hartha
လူသိနည်းလှတဲ့လှေကားအဆံ တပ်ဆင်ခြင်း သိကောင်းစရာမျှဝေပါတယ်။ ရှေ့ထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလဲမကြွယ်နဲ့စကားမျိုးလိုပါပဲ။ အိမ်တစ်အိမ်ဆောက်ရာတွင်း အဓိကအရေးကြီးတာ အိမ်လှေကား ပြုလုပ်ခြင်းပါပဲ။ ရှေးကျမ်းဆရာတို့သည် စုံ မ နှစ်ခုလုံး တပ်ကောင်း၏ဟုဆိုသည် လက်သမား ကျမ်းဆရာတို့က မကိုသာ တပ်စေပါတယ်။ လက်သမား ဆရာကြီးများမှာ စုံတပ်သည်လည်း ရှိတယ် ။မ တပ်သည်လည်း ရှိပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပထမအထစ်မှ [လာဘံ ၊သုခံ ၊မရဏံ ၊လာဘ သု ခ မရဏ]တွက်ယူကာ မရဏံ မရဏ ကို ရှောင်ပါတယ်။ ပထမထစ်က လာဘဒုတိယထစ္က သုခတတိယထစ်ကမရဏ လာဘက လာတ်လာဘ ပေါများခြင်း။ သုခက ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း။မရဏက ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ ။ လာဘက ၁ထစ် ၊ ၄ ထစ်၊ ၇ ထစ် … Read more
စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲလွန်းလို့ ကလေးတွေကို လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတွေအား မွေးစားဖို့လိုက်ပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့(ရုပ်သံ)
ဒီလိုကာလတွေမှာတော့ ပြည်သူတွေ ခမျာ အခြေအနေဆိုးတွေကို ဆက်တိုက် ကြုံနေရတာကြောင့် ​တော်တော်များများ ခက်ခဲနေကြသူတွေကြီးပါပဲ ။ အခြေခံလူတန်းစားနဲ့ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ ပြည်သူတွေ ဆိုရင် ပိုလို့တောင် ဆိုးပါသေးတယ် ။ တစ်ချို့ဆို အရမ်း ဒုက္ခရောက်ပြီး ထမင်းတောင် နပ်မမှန်ကြတော့တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ကြံမိကြံရာ ​မလုပ်သင့်တာတွေကို ပြုလုပ်လာကြပါတယ် ။ အခုလည်း တွံတေးမြို့နယ်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးက စားစရာမရှိတာကြောင့် သူမရဲ့ ကလေးတွေကို လမ်းကသူတွေကို လိုက်ပေးပစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု တွေ့ရပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းကို သိသွားတဲ့ အနီးဝန်းကျင်က ပြည်သူတွေက မကြည့်ရက်တာကြောင့် အလှူငွေတွေ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းပေးရင်း ကူညီလိုက်ကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။ ဗီဒီယိုထဲမှာ သူမရဲ့ ပြောပြချက်အရ ကလေးတွေကို ခုလို လိုက်ပေးရတာလည်း … Read more
ကလေးငယ်တွေကိုဒီလိုပုံစံထိုင်နေတာတွေ့ရင်ချက်ခြင်း တားမြစ်သင့်ပါတယ် သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကလေးငယ်တစ်ဦးကခြေနှစ်ဖက်ကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာWပုံစံလုပ်ပြီးထိုင်နေတာမျိုးမြင်ဖူးပါလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်လည်းငယ်ငယ်ကဒီလိုထိုင်ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်ဒီလိုထိုင်နေတဲ့ကလေးငယ်တစ်ဦးကိုမြင်လိုက်ရင်တော့ ချက်ခြင်းရပ်တန့်ပစ်ဖို့ပြော သင့်ပါတယ်ဒီပုံစံဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်အတော်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ ဆရာဝန်တွေရဲ့ထောက်ပြချက်အရကလေးငယ်တစ်ဦးကဒီလိုပုံထိုင်နေခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းအရိုးတွေအတွက်အတော်စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးနေတုန်းမှာ ဒီလိုထိုင်တဲ့အခါတင်ပါးရိုး၊ဒူးရိုးနဲ့ခြေမျက်စိကိုထိခိုက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းအရမ်းများပါတယ် ဒူးဆစ်နေရာမှာရှိတဲ့အရိုးနှစ်ခုဆုံချက်ဟာဒီလိုထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဟန်ချက်ပျက်သွားလေ့ရှိပါတယ် အကျိုးဆက်ကတော့ကြီးလာတဲ့အခါအခြားကလေးငယ်တွေလိုအားကစား လှုပ်ရှားမှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တာပါပဲ ဘောလုံးကစားတာလိုမျိုးလျင်လျင်မြန်မြန်လှုပ်ရှားရတဲ့နေရာတွေမှာ ကစားနိုင်မှာမဟုတ်တာပါပဲ ဒါကြောင့်ဒီပုံစံထိုင်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေ့ရင်ချက်ခြင်းတားမြစ်ရမှာပါ….။ credit Unicode Version ကလေးငယျတှကေိုဒီလိုပုံစံထိုငျနတောတှရေ့ငျခကျြခွငျး တားမွဈသငျ့ပါတယျ သငျ့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြမှာကလေးငယျတဈဦးကခွနှေဈဖကျကိုအင်ျဂလိပျအက်ခရာWပုံစံလုပျပွီးထိုငျနတောမြိုးမွငျဖူးပါလိမျ့မယျ ဒါမှမဟုတျသငျကိုယျတိုငျလညျးငယျငယျကဒီလိုထိုငျခဲ့ဖူးပါလိမျ့မယျဒီလိုထိုငျနတေဲ့ကလေးငယျတဈဦးကိုမွငျလိုကျရငျတော့ ခကျြခွငျးရပျတနျ့ပဈဖို့ပွော သငျ့ပါတယျဒီပုံစံဟာ ကနျြးမာရေးအတှကျအတျောစိုးရိမျစရာကောငျးတဲ့ကိစ်စပါ ဆရာဝနျတှရေဲ့ထောကျပွခကျြအရကလေးငယျတဈဦးကဒီလိုပုံထိုငျနခွေငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျအောကျပိုငျးအရိုးတှအေတှကျအတျောစိုးရိမျစရာကောငျးပါတယျငယျရှယျစဉျခန်ဓာကိုယျဖှံ့ဖွိုးနတေုနျးမှာ ဒီလိုထိုငျတဲ့အခါတငျပါးရိုး၊ဒူးရိုးနဲ့ခွမေကျြစိကိုထိခိုကျဖို့ရာခိုငျနှုနျးအရမျးမြားပါတယျ ဒူးဆဈနရောမှာရှိတဲ့အရိုးနှဈခုဆုံခကျြဟာဒီလိုထိုငျလိုကျတဲ့အတှကျဟနျခကျြပကျြသှားလရှေိ့ပါတယျ အကြိုးဆကျကတော့ကွီးလာတဲ့အခါအခွားကလေးငယျတှလေိုအားကစား လှုပျရှားမှုကောငျးကောငျးမလုပျနိုငျတာပါပဲ ဘောလုံးကစားတာလိုမြိုးလငျြလငျြမွနျမွနျလှုပျရှားရတဲ့နရောတှမှော ကစားနိုငျမှာမဟုတျတာပါပဲ ဒါကွောငျ့ဒီပုံစံထိုငျနတေဲ့ကလေးငယျတှရေ့ငျခကျြခွငျးတားမွဈရမှာပါ….။ credit ကလေးငယ်တွေကိုဒီလိုပုံစံထိုင်နေတာတွေ့ရင်ချက်ခြင်း တားမြစ်သင့်ပါတယ် သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကလေးငယ်တစ်ဦးကခြေနှစ်ဖက်ကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာWပုံစံလုပ်ပြီးထိုင်နေတာမျိုးမြင်ဖူးပါလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်လည်းငယ်ငယ်ကဒီလိုထိုင်ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်ဒီလိုထိုင်နေတဲ့ကလေးငယ်တစ်ဦးကိုမြင်လိုက်ရင်တော့ ချက်ခြင်းရပ်တန့်ပစ်ဖို့ပြော သင့်ပါတယ်ဒီပုံစံဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်အတော်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ ဆရာဝန်တွေရဲ့ထောက်ပြချက်အရကလေးငယ်တစ်ဦးကဒီလိုပုံထိုင်နေခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းအရိုးတွေအတွက်အတော်စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးနေတုန်းမှာ ဒီလိုထိုင်တဲ့အခါတင်ပါးရိုး၊ဒူးရိုးနဲ့ခြေမျက်စိကိုထိခိုက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းအရမ်းများပါတယ် ဒူးဆစ်နေရာမှာရှိတဲ့အရိုးနှစ်ခုဆုံချက်ဟာဒီလိုထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဟန်ချက်ပျက်သွားလေ့ရှိပါတယ် အကျိုးဆက်ကတော့ကြီးလာတဲ့အခါအခြားကလေးငယ်တွေလိုအားကစား လှုပ်ရှားမှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တာပါပဲ ဘောလုံးကစားတာလိုမျိုးလျင်လျင်မြန်မြန်လှုပ်ရှားရတဲ့နေရာတွေမှာ ကစားနိုင်မှာမဟုတ်တာပါပဲ ဒါကြောင့်ဒီပုံစံထိုင်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေ့ရင်ချက်ခြင်းတားမြစ်ရမှာပါ….။ credit Unicode Version … Read more
ကိုယျနဲ့တဈညစာပြျောဖို့ချေါလာတဲ့ အပြျောမယျလေးကို လမျးဘေးကသူတောငျးစားကိုပေးပွီး ပြျောခိုငျးလိုကျသောအခါ…
ပုဂံရာဇဝငျထဲက ပြောကျဆုံးနသေောယာဉျပြံ(သို့)အလောငျးစညျသူမငျးကွီးရဲ့ ဖောငျစင်ျကွာ
ပုဂံ မင်းဆက်များထဲတွင် အလောင်းစည်သူမင်းသည် အလွန်ဘုန်း ကြီးသော မင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ ခမာနဲ့ထိုင်းတို့က အလောင်းစည်သူမင်းကို နတ်ဘုရားတစ်ပါးလို့တင်စားကြပါတယ်။ အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးဟာ တိုင်ခန်း လှည့်လည်တဲ့ အခါမှာ ဖောင်စကြာ ဆိုသည့် ယာဉ်ပျံကို အသုံးပြုကာ လှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အလောင်းစည်သူမင်းနတ်ရွာစံပြီးနောက်မှာတော့ ထို ဖောင် စကြာဆိုတဲ့ ယာဉ်ပျံ အကြောင်းကိုရေးသားထားခြင်းကို မတွေ့ရှိတော့ပါဘူး။ ထို ဖောင်စကြာ ဆိုသည့် ယာဉ်ပျံမှာ အဘယ်သို့ ရောက်ရှိသွားပါသနည်း ? အလောင်းစည်သူမင်း၏ သာသနာမှာ ဘုန်းကံကြောင့် ရရှိခဲ့သောဖောင်စကြာ ယာဉ်ပျံမှာ အလောင်းစည်သူမင်း နတ်ရွာ စံချိန်မှာ ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းလား ? ထို အလောင်းစည်သူမင်း၏ ဘဝ နေဝင်ချိန်မှာ အံသြဖွယ်ကောင်းလှသည်။ မိမိ၏သားအရင်းဖြစ်သော နရသူမင်း၏ ခေါင်းအုံးနှင့်ဖိသတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ … Read more
ခြောမောလှပတဲ့ ဘဏျမနျနဂြောမိနျးကလေးကို ခဈြကွိုကျမိသောကွောငျ့ ပိုကျဆံမြားကုနျသှားခဲ့သညျ့ အသကျ၇၀အရှယျ ဘီလြံနာသူဋ်ဌေးကွီး အသက်၇၀အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဖူကျန်းပြည်နယ်မှ ဘီလျံနာအဖိုးအိုတစ်ဦးဟာ သူ၏ဇနီးသည်သေဆုံးသွားခဲ့သောကြောင့် တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဘဝ၏ကူဖော်လောင်ဖက်တစ်ဦးကို ရှာဖွေနေခဲ့ချိန်တွင် လိုင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် အသက်၃၅နှစ်အရွယ် ဘဏ်မန်နေဂျာ မိန်းမလှလေးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ ထို့နောက်စကားများပြောကြည့်ပြီး ၃ ရက်အကြာတွင် ချစ်သူရည်းစားများဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ရည်းစားဖြစ်ပြီး မကြာမီအချိန်မှာဘဲ အမျိုးသမီးဟာ ကားလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဟုဆိုကာ VND နှစ်ဘီလီယံကို တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ သူဋ္ဌေးကြီးဟာလည်း အမျိုးသမီးကို ယုံကြည်ကာ ထုတ်ပေးခဲ့မိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကောင်မလေးဟာ အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြပြီး များပြားလှသောငွေကြေးများကို အမြဲတောင်းခံနေခဲ့ပါတယ်။ ကြာလာသောအခါ ကောင်မလေးဟာ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီး အဖိုးအိုကိုထားသွားခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးအိုဟာ ရဲများကို အကူအညီတောင်းထားပြီး ရဲများဟာလည်း စုံစမ်းမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဟု သိရပါတယ်။ Unicode Version အသကျရဝအရှယျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ … Read more
ကလေးထိန်း အိမ်အကူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ရက်စက်တဲ့လုပ်ရပ်…
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေကို လူတစ်စိမ်းနဲ့ ထိန်းခိုင်းခဲ့ဖို့ဆိုတာ မိဘတွေအတ်ွကတော့ တော်တော်လေးကို မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကိုယ်က အလုပ်မအားလို့ ကလေးကလည်း မထိန်းနိုင်၊ အလုပ်ကလည်း ပျက်မရဆိုရင် သူသူငါငါ အိမ်ဖော်ငှားတတ်ကြပါတယ်…။စေတနာပါတဲ့ အိမ်ဖော်မျိုး၊ တကယ်ကောင်းတဲ့ အိမ်ရှင်မျိုး နှစ်ယောက်ထပ်တူကျဖို့ဆိုတာ တကယ့်ကို မလွယ်ပါဘူ…။ အင်ဒိုနီးရှားလင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ကလည်း ဒါကို သက်သေပြနေပါတယ်။ အလုပ်မအားတဲ့ အဆုံး ဂျူဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကို နို့မပြတ်သေးတဲ့ ကလေးနဲ့ သမီးအကြီးဖြစ်သူကို ထိန်းဖို့အတွက် ငှားလိုက်ပါတယ် ။ စစချင်း သုံးလလောက်မှာ ဘာပြဿနာမှမရှိပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက် ပြန်ရောက်လာလို့ကလေးထိန်းဖို့ လုပ်လိုက်ချိန် အစောကြီးအိပ်အိပ်သွားပါတယ်။ နို့ဘူးတိုက်ရင်လည်း လုံးဝမသောက်ဘူးဆိုပြီး အတင်းငြင်းနေတာကို တွေ့ချိန်မှာတော့ အမေဖြစ်သူက သံသယဝင်လာပါတော့တယ်…။သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က နို့ဘူးထဲ အိပ်ဆေးထည့်တိုက်နေပြီလို့ သတိပေးလိုက်ချိန်မှာ ရှော့ခ်ရသွားပါပြီ။မသင်္ကာပေမဲ့ … Read more
မိန်းမရဲ့ဆေးတွေ အမြဲခိုးခိုးသောက်နေတဲ့ ယောက်ျားရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်
“​မောင်​​ရေ လာပါဦး။ ဒီမှာ သား​လေးက ​​ကျွန်​မ​သောက်​​နေကျ အမျိုးသမီးအား​ဆေး​တွေ သူ ​သောက်​မယ်​ချည်းလုပ်​​နေတယ်​။ ​ပြောလို့လည်းမရဘူး” ကိုသာ​အေးက သူ့မိန်းမကို အသာ​နေဆိုသည့်​သ​ဘောဖြင့်​ လက်​ကာပြလိုက်​ပြီး သားဖြစ်​သူကို “သားသား” “ဂျာဂျာ့” “အဲတာ ​မေ​မေ့​​ဆေး​တွေ​လေသားရဲ့” “​မေကြီးက တူတစ်​​ယောက်​တည်း ​တောက်​​နေတယ်​။ တားတားရဲ ​တောက်​ချင်​တာ​ပေါ့ရို့” “အဲဒီ​ဆေးက ​ယောင်္ကျား​တွေ​သောက်​လို့မရဘူးသားရဲ့” “တောက်​မိရင်​ ဘာဖြစ်​ရဲ” “​သောက်​မိသွားရင်​ ​ဟောဒီက သားသား​ရွှေပန်း​လေး တဖြည်းဖြည်း ​သေးသွားပြီး အပ်​ချည်​မျှင်​​လောက်​ပဲ ရှိ​တော့မှာ” ကိုသာ​အေးက သားငယ်​​ရွှေပန်း​လေးကို လက်​နဲ့တို့ပြီး​ပြောလိုက်​​တော့ သားဖြစ်​သူ မျက်​လုံးပြူးသွားတယ်​…။ “ဟင်​ ဂယ်​ဂျီးယား” “တကယ်​​ပေါ့ သားသားရဲ့” “အာ့ဆို ​တောက်​​တော့ဝူး ​ရော့” သားငယ်​က ​ကြောက်​​ကြောက်​ရွံ့ရွံ့ဖြင့်​ သူ့လက်​ထဲက​ဆေးပုလင်းကို ကိုသာ​အေးထံ ​ပေးလိုက်​သည်​။ ကိုသာ​အေးက သားငယ်​ထံမှ​ဆေးပုလင်းကိုယူပြီး အောင်​နိုင်​သူတစ်​​ယောက်​၏ အပြုံးမျိုးဖြင့်​ … Read more
“ဖုတ်”ဝင်တယ်ဆိုပြီးသေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ…